Hiran State - News: HS:-Ilaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dilay wariye Fantastic
HS:-Ilaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dilay wariye Fantastic
Muqdisho(Somaliradio). Kooxo kuhubeysan Bastoolado oo kamid ah Askarta gaar ka ah ee ilaalada gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa toogasho kudilay Wariye Xasan Cismaan Cabdi (Fantastic) oo dhalasho ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan.
Dad goob jog ah ayaa Somali radio usheegay in raga dilka geystay wajiyadooda la garanayo kuwaasi oo marka ay dilka geeysteen uu goobta ka qaaday gaari kamid ah kuwa ay kusocdaan madaxda dowlada KMG ka ah.
Fantastic ayaa ahaa agaasimaha Idaacada iyo TV –ga Shabelle ee Magaalada Muqdisho waxaana loo dilay sida la sheegay in Idaacadiisa aysan taabacsaneyn siyaasada Maamulka Gobolka Banaadir siinadeysay warar aanan raali galineynin maamulka Gobolka Banaadir.
Cisman Cali oo ay qaraabo dhow yihiin Marxuumka ayaa usheegay Somali radio in Xasan uu dhintay intii Cisbitalka loo siiwaday kadib dhiig bax iyo xabadaha oo meel halis ah uga yiilay.
Cismaan waxaa uu xaqiijiyay in baryahanba ay jireen hanjabaado uga imanayay Marxuumka saraakiil kamid ah ciidamada Dowlada, kuwaasi oo usheegay inay dilayaan hadii uusan joojin shaqada uu ka hayo idaacada Shabeelle.
Raga wax dilay waxaa ay umuuqdeen kuwo sugayay Xasan Fantastic waxana ay kudileen meel udhow gurigiisa ayaa sheegay goob joogahaasi oo intaa ku daray in dilka Xasan uu qeyb kayahay ugaarsiga ay ciidamada dowlada iyo kuwa Maamulka Banaadir ay kuhayaan Wariyaasha Soomaaliyeed.
Xasan Fantastic waxaa uu kamid aha wariyaasha ugu firfircoon Magaalada Muqdisho, taasina waxaa ay keentay inuu Madax kanoqodo Idaacada Shabelle oo kamid ah idaacadaha ugu facaweyn magaalada Muqdisho.
Warar madaxbanaan ayaa sheegay in wariyahan loodilay warar ay shaacisay Idaacada uu madaxda kayahay ee SHabelle gaar ahaan warar kusaabsan Musuq maasuq kajira dekada Muqdisho. lacago uu lunsaday maamulka Gobolka Banaadir iyo warbixino xasaasi ahaa oo ay Shabelle ka diyaarisay saraakiil kamid ahayd Xukuumadii Farmaajo oo lacago lunsaday.
Fantaastic waxaa uu ahaa Madaxa idaacada Afka dheer ee Shabelle oo aalaaba tooshka ku ifisa dhibateynta ay ciidamada dowlada iyo masuuliyiintaba kula kacaan shacabka iyo xadida hantida dadweynaha
Wixi warar ah ee ku soo kordha arrintaasi waxaad kala socondoontaan Somali radio.
· admin on January 29 2012 09:51:31 · 0 Comments · 2939 Reads ·
14,585,603 unique visits